Umaka: nweba » Martech Zone
Isikhathi sokufunda: 3 imizuzu Njengomkhiqizo womhlaba wonke, awunabo ababukeli bomhlaba owodwa. Izithameli zakho ziqukethe izethameli eziningi zesifunda nezasendaweni. Futhi ngaphakathi kwalezi zilaleli kunezindaba ezithile ezizobanjwa futhi zixoxwe. Lezo zindaba aziveli nje ngomlingo. Kufanele kube nesinyathelo sokuzitholela, ukusithatha, bese sabelana ngakho. Kuthatha ukuxhumana nokusebenzisana. Uma kwenzeka, kuyithuluzi elinamandla lokuxhuma umkhiqizo wakho kuzethameli zakho ezithile. Manje wenza kanjani
Isikhathi sokufunda: <1 iminithi Uyemukelwa kulokho ochwepheshe bezentengiso abakubiza nge-The Customer Experience Era. Ngo-2016,. Umthombo: Gartner Njengoba ukusebenza kwabathengi nobuchwepheshe buqhubeka nokuvela, amasu akho wokumaketha okuqukethwe kudingeka ahambisane nohambo lwamakhasimende. Okuqukethwe okuphumelelayo manje kuqhutshwa ngokuhlangenwe nakho - nini, kuphi futhi kanjani amakhasimende akufunayo. Okuhlangenwe nakho okuhle kuzo zonke iziteshi zokumaketha kuyisihluthulelo esisodwa esibaluleke kakhulu kulokhu kuziphendukela kwemvelo. Ukunwetshwa kuhlolisise lesi senzakalo muva nje
NgoLwesibili, ngoJulayi 14, i-2015 NgoLwesithathu, July 15, 2015 UJenn Lisak Golding
Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu Ngenkathi ukuxoxa izindaba ze-buzzword kungahle kube okusha, umqondo wokumaketha okubukwayo awusona. Ama-65% wabantu jikelele angabafundi ababukwayo, futhi akuyona imfihlo ukuthi izithombe, ihluzo nezithombe okunye kokuqukethwe okuthandwa kakhulu kuwo wonke amanethiwekhi omphakathi. Abakhangisi bathathwa njengamakethi abukwayo njengesinyathelo esithuthukayo ngokwakha nokuhlonipha umqondo wokuxoxa izindaba lapho sisebenzisa khona isithombe ukuxoxa indaba. Kungani Ukusebenza Kokuxoxa Izindaba Ezisebenzayo? Isayensi iyatshela
Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu I-ProofHQ iyi-software esekwe ku-SaaS esekwe ku-inthanethi eyenza lula ukubuyekezwa nokuvunywa kokuqukethwe nempahla yokudala ukuze amaphrojekthi wokumaketha aqedwe ngokushesha futhi ngomzamo omncane. Ingena esikhundleni sezinqubo ze-imeyili nezokukopisha, inikeze amaqembu wokubuyekeza amathuluzi wokubuyekeza ngokubambisana okuqukethwe kokudala, kanye namathuluzi okuphatha amaphrojekthi wokulandela umkhondo wezibuyekezo eziqhubekayo. I-ProofHQ ingasetshenziswa kuyo yonke imidiya kufaka phakathi ukuphrinta, idijithali nomsindo / okubukwayo. Imvamisa, izimpahla zokudala ziyabuyekezwa futhi zivunyelwe kusetshenziswa
Isikhathi sokufunda: <1 iminithi Kokuthunyelwe kwangaphambilini, sixoxe ngokuthi Ukuphathwa Kwezimpahla Zedijithali Kuyini, Kungani Ukuphathwa Kwezimpahla Zedijithali Kubaluleke Kakhulu Ekukhangiseni Sekukonke, nokuthi Ungazicacisa Kanjani Izindleko Zokulawulwa Kwempahla Yedijithali. Kule infographic evela ku-Widen, bachaza imininingwane yokuthi ukuphathwa kwempahla yedijithali kuzokusiza kanjani ukuthi usebenzise isu elisebenza kahle kakhulu lokuqukethwe. Ngokuqondile, ukwakhiwa nokuqapha okuqukethwe kwakho endaweni yokugcina emaphakathi kusebenza kakhulu kunokuqukethwe okusakazeke ngaphesheya